iOS operating system ကို အိုင်ဖုန်းသတင်းများ (စာမျက်နှာ ၂)
"Apple နှင့်ဆိုင်းအင်" သည် Blue Mail developer ၏မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်သည်
iOS နှင့် Android အတွက် Blue Mail application ကိုတီထွင်သူမှမှတ်ပုံတင်ထားသောမူပိုင်ခွင့်ကို Apple နှင့်အတူဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
iOS 13.1.2 မတိုင်မီ Apple သည် firmware version များကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းမပြုတော့ပါ
iOS 13.1.2 မတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့၏ Apple မိုဘိုင်းပစ္စည်းများနှင့်အတူဗားရှင်းများသို့ပြန်သွားစရာမလိုတော့ပါ။ အက်ပဲလ်ဟာဗားရှင်းဟောင်းများကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်။
Deep Fusion သည် iPhone 11 နှင့် 11 Pro တို့တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
Deep Fusion ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone ၏ကင်မရာ၏လုပ်ဆောင်မှုအသစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအသေးစိတ်နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရအသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည်။
Deep Fusion နှင့် Apple သည် iOS 13.2 Beta ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်
iOS 13.2 Beta အသစ်သည် Apple ကိုနောက်ဆုံး Keynote တွင်ကြေငြာခဲ့သည့်လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးယခုတိုင်ကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရသေးပါ။
New York မှ Enhanced Apple Maps ကိုစတင်ရယူသည်
iOS Maps အက်ပ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်မြေပုံများသည်နယူးယောက်မြို့ရှိသုံးစွဲသူများကိုစတင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်
Apple က iOS 13.1.2 နှင့် watchOS 6.0.1 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Apple သည် iOS 13.1.2 ကို HomePod, iCloud, Camera, Screen Calibration, Bluetooth နှင့် Shortcuts များနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြသခဲ့သည်။
Apple နှင့် Maroon5တို့သည်သူတို့၏သီချင်းအသစ်များကို Photos app တွင်သုံးခွင့်ပြုသည်
Maroon5မှသီချင်းအသစ်ကို iPhone, iPad နှင့် iPod touch ရှိ iOS 13 ၏ Memories feature မှအခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။
Apple က iOS 13.1.1 အမှားပြင်ဆင်ချက်များကိုလွှတ်ပေးခဲ့သည်
Apple က iOS 13.1.1 ကို Siri၊ Third-Party Keyboards, Backups နှင့် Battery Life နှင့်ပြCrနာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားစေခြင်း
Spotify သည် Siri ကို iOS အတွက် Beta တွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်
Spotify သည်၎င်း၏ application ကို iOS 13 နှင့်အညီ Siri နှင့်လိုက်ဖက်ညီအောင်ပြုပြင်ထားပြီး Apple ၏လက်ထောက်မှတစ်ဆင့်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
IOS 12.4.2 ကိုအိုဟောင်း iPhone နှင့် iPad များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်
IOS 12.4.2 ကိုယခုအပတ်တွင်ပြန်လည်မွမ်းမံနိုင်သည့်အဟောင်းအိုင်ဖုန်းများနှင့်အိုင်ပက်ဒ်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်
IOS 13.1 နှင့် iPadOS ကိုယခု download လုပ်နိုင်ပါပြီ
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော iPadOS update ကိုယခုထောက်ပံ့ထားသော iPad မော်ဒယ်များနှင့်အိုင်ဖုန်းများအတွက် iOS 13.1 ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
iOS 13 ဖြင့်သင်၏လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းချုပ်ပါ
iOS 13 ကိုသုံးစွဲသူများအားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်
iOS 13 ဗားရှင်းသစ်ကိုယခုအခါ download ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ နောက်တဖန်မစောင့်ပါနှင့်သင်၏စက်ကိရိယာများကို update မထားပါနဲ့
Apple က iOS နှင့် iPadOS 13.1 beta အသစ်များကိုစတင်ခဲ့သည်
iOS 24 ကိုလူသိရှင်ကြားမထုတ်လွှင့်မီ ၂၄ နာရီအလိုတွင် Apple သည်စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင်ရောက်ရှိလာမည့်စတုတ္ထ beta iOS 13 နှင့် iPadOS 13.1 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဤနည်းသည် Apple Arcade၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများအတွက် Apple နှုန်းထားအတိုင်းဖြစ်သည်
ကျနော်တို့က Apple Arcade ကိုစမ်းသပ်ပြီး၊ သူဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်၊ ဘယ်ဂိမ်းတွေပါဝင်တယ်၊ ပြီးတော့လက်ရှိကတ်တလောက်ထဲမှာအထင်ရှားဆုံးပါ။
Craig Federighi ၏အဆိုအရ Apple သည် iMessage ရှိပရိုဂရမ်မာမက်ဆေ့ခ်ျများဖြစ်နိုင်ချေကိုစဉ်းစားခဲ့သည်
ဆော့ဝဲလ်အက်ပဲလ်၏အကြီးတန်းဒုဥက္ကPresident္ဌ Craig Federighi က iMessage သို့ပရိုဂရမ်မာမက်ဆေ့ခ်ျများထည့်သွင်းရန်စဉ်းစားကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်
ဖွင့်ရက်တွင်ရရှိနိုင်မည့် iOS5စွမ်းဆောင်ချက်အသစ် ၅ ခုရှိသည်
iOS5တွင်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ် (၅) ခုရှိသည်။ ဖွင့်ရက်တွင်မရရှိနိုင်သော်လည်း iOS 13 တွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်
iOS ကိုတိုက်ခိုက်တာဟာတရုတ်က Uyghur လူမျိုးစုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်
iOS ကို ၂ နှစ်ကြာရယူခဲ့ပြီးယခုဖြေရှင်းနိုင်ပြီဖြစ်သောတိုက်ခိုက်မှုကိုဝီဂါလူမျိုးစုလူနည်းစုကိုထိန်းချုပ်ရန်တရုတ်ကအသုံးပြုခဲ့သည်။
ပထမဆုံး iOS 13.1 beta ကို developer များအတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ
iOS 12.4.1 အသစ် update သည် iOS 12.4 မှစီမံသောကိရိယာများအတွက် jailbreak ဖြစ်နိုင်ချေကိုပိတ်ထားသည်
developer များအတွက် IOS 8 Beta 13, iPad OS, tvOS 13 နှင့် watchOS 6
Apple က iOS 8, iPad OS, tvOS 13 နှင့် watchOS 13 တို့၏ beta6ဗားရှင်းအသစ်များကို developer များလက်ထဲအပ်လိုက်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော iOS ပွားများဖန်တီးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီအား Apple တရားစွဲဆိုခဲ့သည်
Corellium ကို Apple မှတရား ၀ င်ခွင့်မပြုဘဲ iOS ၏ပုံတူအတိအကျနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းခံခဲ့ရသည်။
Developer များအတွက် iOS 13 နှင့် iPadOS တို့၏ XNUMXth beta သည်ယခုအချိန်အထိဖြန့်ချိလိုက်ပြီဖြစ်သည်
iOS 13 နှင့် iPadOS တို့၏ ၇ ကြိမ်မြောက် beta သည် developer များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာယနေ့အထိထုတ်ဝေထားသောနောက်ဆုံး version ဖြစ်သည်။
၄ နှစ်ကြာ Apple ထုတ်ကုန်များ၏ ၉၀% သည် iOS 90 ကိုတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်
Apple တွင်သူတို့အားသာချက်တစ်ခုမှာဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ရှိနေခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများသည်ကြီးမားသောမွမ်းမံမှုများအားတုန့်ပြန်သည်ကိုကောင်းစွာသိကြသည်
developer များအတွက်ဆဌမ beta iOS 13 ကိုရရှိပြီ
IOS application developer များသည်ယခုအချိန်တွင် iOS ၏ဆယ့်သုံးခုမြောက်ဆဌမ beta ကိုရရှိနေပြီဖြစ်သည်။
Apple က iOS 5, iPadOS နှင့် tvOS 13 တို့၏ Beta 13 ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
Apple သည် iOS 13, iPadOS နှင့် tvOS 13 beta အသစ်များကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Beta5သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ရာ developer များအတွက်သာဖြစ်သည်။
PS4 သို့မဟုတ် Xbox One controller ကို iOS 13 နှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း
iOS 13 နှင့် iPadOS ဖြင့်သင်သည် PS4 နှင့် Xbox One တို့၏ Controllers များကိုသင်၏ iPhone၊ iPad နှင့် Apple TV များတွင် MFI ထိန်းချုပ်သူများနှင့်လိုက်ဖက်သောဂိမ်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
iOS 12.4 - သင့်ဒေတာကို iPhone ဟောင်းမှအသစ်သို့တိုက်ရိုက်ကူးယူပါ။
iOS 12.4 အသစ် update နှင့်အတူသင်၏ data များကို iCloud သို့မဟုတ် iTunes မလိုပဲသင့် iPhone ဟောင်းမှတိုက်ရိုက်ကူးယူပါ။
Apple Maps: iPadOS ပေါ်ရှိဖန်သားပြင်များကအစစ်အမှန် multitasking လုပ်ခြင်း၏ဥပမာ
iPadOS သည်အက်ပလီကေးရှင်းကဲ့သို့သော multitasking စစ်စစ်ကို အခြေခံ၍ ကွဲပြားသောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
iPhone သည် iPad နှင့် iPad အဟောင်းများအတွက် iOS 9.3.6 နှင့် 10.3.4 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Apple သည်ရပ်တန့်ထားသောကိရိယာများကိုမေ့လျော့။ GPS နှင့် bug များကိုပြုပြင်ရန် iOS 9.3.6 နှင့် 10.3.4 သို့မွမ်းမံမှုများထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Apple က iPhone, iPad နှင့် HomePod အတွက် iOS 12.4 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
HomePod ကိုဗားရှင်း 12.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအပြင် Apple သည် iPhone နှင့် iPad အတွက်သတင်းများနှင့်အတူ iOS 12.4 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်
iOS 13 တွင်နောက်ခံရှိနေရာများအကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားစာများရှိသည်
Apple က iOS 13 မှာ feature တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပေးထားပြီးနောက်ခံနောက်ခံနေရာများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်မည်သည့် app ကိုအသုံးပြုသူကိုအသိပေးသည်။
iOS 13 နှင့် iPadOS တို့၏တတိယမြောက်အများသုံး beta ကိုယခုရယူပါ
developer များအတွက် iOS 13 ၏စတုတ္ထ beta version ထွက်လာပြီးနောက် Apple သည် iOS 13 ၏တတိယမြောက်အများပြည်သူသုံး beta ကိုလွှတ်လိုက်သည်။
ဒါက iPadOS Multitasking အသစ်ပါ
iPadOS က multitasking ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာ application များစွာကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်၊ element များကိုလျှင်မြန်စွာဆွဲယူရန်သို့မဟုတ်ဖွင့်ရန် app များကိုမြန်ဆန်စေသည်။
ဤအရာများသည် iOS 13 Beta4၏သတင်းများဖြစ်သည်
iOS 13 Beta4တွင် icon အသစ်များကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်၊ alarm system တွင်တိုးတက်မှုနှင့် 3D Touch စနစ်၏တိုးတက်မှုများကဲ့သို့သောအသစ်အဆန်းကိုဘာလဲ။
Apple က iOS 4, iPadOS နှင့် watchOS 13 တို့၏ Beta6ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
Apple သည် iOS 3, iPadOS, tvOS 13 နှင့် watchOS6တို့၏စတုတ္ထ beta ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော developer များသာရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤအရာများသည် iOS 13 Beta3တွင်တွေ့ရသောအမှားများနှင့်အမှားများဖြစ်သည်
iOS 13 Beta3သည်အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည့်အမှားအယွင်းများနှင့်အမှားအယွင်းများမရှိဘဲယင်းတို့ကို Cupertino ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးလည်ပတ်စနစ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
Beta3အသစ်နှင့် iOS 13 နှင့် iPadOS တို့၏ဒုတိယ Public Beta ကိုယခုရရှိနိုင်ပါသည်
Apple က iPhone 13 နှင့်3Plus နှင့် iOS7၏ဒုတိယ Public Beta ပါ ၀ င်သည့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော iOS7Beta 13 ဗားရှင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Xiaomi သည် Apple's Animoji ကိုသာကူးယူရုံတင်မကဘဲ Mimoji ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် Apple spot များကိုလည်းအသုံးပြုသည်
Xiaomi မှယောက်ျားများသည် Apple ကြော်ငြာအဟောင်းကိုထည့်ပြီးသူတို့ Mimoji အသစ်ကိုမြှင့်တင်ရန် Animoji ကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်။
iOS 13 နှင့် macOS Catalina တို့သည် Face ID သို့မဟုတ် Touch ID မှတစ်ဆင့် iCloud ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်
Apple က iOS 13 နဲ့ iPadOS တွေကို Face ID နဲ့ Touch ID သုံးပြီး Device တွေကနေသင့်ရဲ့ iCloud အကောင့်ကိုဖွင့်နိုင်မှာပါ။
ဤရွေ့ကား iPadOS ပေါ်ရှိ Notes app ၏အဓိကအသစ်အဆန်းများဖြစ်သည်
iOS 13 နှင့် iPadOS အသစ်တို့သည် Notification application နှင့်သက်ဆိုင်သော features အသစ်များကိုယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးပိုမိုဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်စေသည်။
iOS 13 မှာ FaceTime နဲ့ Apple ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပြင်ဆင်လိုက်သည်
Apple က iOS 13 မှာ optionTo အသစ်ထပ်ထည့်လိုက်တယ်။ သူက FaceTime ဖုန်းခေါ်ချိန်မှာငါတို့ကြည့်နေတာပဲ။ သူကတခြားလူကိုကြည့်ရတာပေါ့။
Apple က iOS 13, iPadOS, MacOS Catalina နှင့် tvOS 13 တို့၏တတိယ beta ဗားရှင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
iOS 3, iPadOS, macOS Catalina နှင့် tvOS 13 beta 13 ဗားရှင်းများကို developer များအတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ
iOS 13 သည်အက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့်ရေဒီယိုကိုအက်ပလီကေးရှင်းများမလိုပဲတိုက်ရိုက်နားထောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်
third-party radio များ၏ application များသည် iOS 13 တွင်သူတို့၏နေ့ရက်များကိုရေတွက်လိမ့်မည်။ ယနေ့ Apple သည်ဤ OS ၏ beta တွင် Apple Music ရှိရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။
iOS 13 တွင် Google Maps ကို Apple Maps ကဖျက်ဆီးလိုက်သည်။
Cupertino ကုမ္ပဏီ၏အညွှန်းစနစ်သည်ဂူဂဲလ်၏လမ်းမြင်ကွင်းကိုတိုးတက်စေရန်၎င်း၏ application ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
iOS 13 ၏ပထမဆုံးသောအများသုံး beta XNUMX
ပထမဆုံး iOS 13 beta ကို iPhone နှင့် iPad အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည် iOS 13 CarPlay အသစ်ဖြစ်သည်
iOS 13: Maps, Music နှင့် Podcasts များလုံးဝသက်တမ်းတိုးသည့် CarPlay အသစ်နှင့်ကြုံတွေ့ရမည့်အရေးအကြီးဆုံးပြောင်းလဲမှုများကိုသင့်အားပြသပါမည်။
iOS 13 ၏ဒုတိယ beta သည်ကျွန်ုပ်တို့အား Files app မှ SMB ဆာဗာများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်
SMB ပရိုတိုကောလ်၏ကျေးဇူးကြောင့် iOS 13 သည်ပြင်ပဆာဗာများသို့ Files အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်လာသောအခါ iOS 13 Beta2တွင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။
Podcast 10 × 34: Apple သတင်းကိုဆန်းစစ်ခြင်းရာသီ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Podcast 2th ရာသီကို Apple ၏ 2019WWDC XNUMX တွင်တင်ပြခဲ့သောဆော့ဖ်ဝဲလ်သတင်းအားလုံးကိုလေ့လာခြင်း…
iOS 13 သည်လျှောက်ထားသူအားတက်ကြွသောစာရင်းပေးသွင်းထားသူကိုဖျက်သောအခါအကြောင်းကြားသည်
iOS 13 ၏ beta version အသစ်သည် app မှကျွန်ုပ်တို့၏ app မှပယ်ဖျက်သောအခါတက်ကြွသော subscriptions ကိုပြသည်
iOS 13 Beta2သည် High-Key Mono mode နှင့်အလင်းချိန်ညှိချက်များကိုပုံတူများသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်
Apple မှယောက်ျားများသည် iOS 13 ၏ဒုတိယ beta တွင် High-Key Mono နှင့် Portrait Mode အတွက်အလင်းချိန်ညှိချက်များကိုထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။
iPhone ၏ NFC ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဂျာမနီတွင် DNI နှင့်နိုင်ငံသားများ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်, iOS 13 တွင် iPhone ၏ NFC သည်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ID၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစရှိသဖြင့် ...
ဝါသနာပါသူတစ် ဦး သည် iPhone 13 တွင် iOS 1 beta6ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်
iOS 13 ကို iPhone6မှာ install လုပ်ထားတယ်လို့ပြောပြီးသူက IPSW ကိုစတင်မယ်လို့ပြောတဲ့ပန်ကာတစ် ဦး ။
သင်၏ iPad, iPhone နှင့် Apple TV ရှိ PS4 Controller နှင့်ကစားနည်း
iPadPOS ၏တင်ဆက်မှုသည်အိုင်ပက်ဒ်အတွက် iOS 13 နှင့်ညီမျှသည်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
iOS 13 သည် HomePod များကို၎င်းတို့၏ LED light များမှတဆင့်တွဲဖက်ပေးမည်ဖြစ်သည်
WatchOS, tvOS, macOS ဗားရှင်းအသစ်များနှင့်အတူ iOS 13 ကိုဇွန်လဆန်းပိုင်းတွင် WWDC တွင်တင်ပြခဲ့သည်။
ဤအရာသည် iK 13 ၏ HomeKit နှင့် Home app ဖြစ်သည်
iOS 13 မှာ HomeKit နဲ့ Home application ကိုစမ်းသပ်ပြီး iPhone အတွက်ဒီဗားရှင်းအသစ်မှာ Apple ထည့်သွင်းထားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပါ။
3D Touch မသေသေးကြောင်း Craig Federighi အတည်ပြု
iOS 13 သည် 3D Touch ကိုအစဉ်အမြဲဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပုံရသည်၊ သို့သော် Craig Federighi ၏အတည်ပြုချက်အရ၎င်းသည်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီးလာမည့် Beta တွင်ပြန်လာမည်
iOS နှင့် iPadOS အတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်နောက်တစ်မျိုးမှာ Siri interface ဖြစ်သည်
Apple ၏ HomeKit လုံခြုံသောဗီဒီယိုအသစ်သည် 200GB သို့မဟုတ် 2TB ပါသော iCloud အစီအစဉ်လိုအပ်လိမ့်မည်
Cupertino မှလူငယ်များသည် iKloud အစီအစဉ်အတွက်ပေးဆပ်နေသမျှကာလပတ်လုံး HomeKit လုံခြုံသောဗီဒီယိုဗီဒီယိုများအတွက် ၁၀ ရက်အခမဲ့နေရာထိုင်ခင်းကိုအတည်ပြုပေးသည်။
အက်ပဲလ်သည်ဘောလုံးကို Spotify တရားရုံးတွင်ထားခဲ့သည်
နောက်ဆုံး၌အက်ပဲလ်သည် iPad နှင့်အတူမောက်စ်ကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ဘယ်လိုရှင်းပြတယ်
iOS 13 သည် updates အသစ်များမှ app များကိုတိုက်ရိုက်ဖျက်ရန်ခွင့်ပြုသည်
iOS 13 မှာအက်ပလီကေးရှင်းကကျွန်တော်တို့ပယ်ဖျက်တဲ့နည်းကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီ။ အခုငါတို့ App Store ပရိုဖိုင်းကိုသွားကြည့်ရအောင်။
ဒါက iOS 13 မှာ screenshot editor အသစ်ပါ
iOS 13 စခရင်ရိုက်ကူးတည်းဖြတ်သူအသစ်၊ ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များတွင်မည်သည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များရှိသည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
iOS 13 သည်အဆက်အသွယ်များအတွင်း "Notes" ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်
iOS 13 သည် third-party application များအားအဆက်အသွယ်များ၏“ မှတ်စုများ” သတင်းအချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုတားဆီးသည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသည်
ဤအရာများသည် iOS 13 Beta 1 တွင်အရေးကြီးဆုံး bug များနှင့်အမှားများဖြစ်သည်
ဒီနေ့ iOS 13 မှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ beta အဆင့်နဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှားအယွင်းများနှင့်အမှားအယွင်းများစာရင်းကိုယနေ့သင်ပြောပြပါမည်။
iOS 13 နှင့် iPadOS beta များတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် Apple သည်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရသည်
iOS 13 နှင့် iPadOS တို့၏ beta ဗားရှင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်ပရိုဖိုင်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားလိုအပ်ချက်များကို Apple ကထပ်ထည့်သည်
အိုင်ပက်ဒ်မှ iPad သည် Mouse အထောက်အပံ့ကိုရရှိသည်
iOS 13 နှင့် iPadOS များရောက်ရှိလာချိန်တွင် screen ကိုအပြန်အလှန်မသုံးဘဲအဆင်ပြေစွာစီမံနိုင်စေရန် mouse ကို iPad နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
iOS 13 နှင့် iPadOS - Apple တင်ပြခဲ့သောသတင်းများ
iOS 13 မှလာမည့်အဓိကသတင်းကိုဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပြီးဖြစ်သည်။
10 × 33 Podcast: iOS 13, iPadOS, watchOS 6, macOS 10.15 နှင့် tvOS 13 အကြောင်း
ယခုအပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Podcast တခုကို iOS 13, iPadOS, watchOS 6, macOS 10.15 နှင့် tvOS 13 တို့မှသတင်းများကို Apple ၏တင်ပြချက်အရခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာပါမည်။
ပြီးခဲ့သည့်နာရီများအတွင်း Apple မှပြုလုပ်ခဲ့သောလှုပ်ရှားမှုများက iTunes ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကောလာဟလများကိုမနက်ဖြန်အတည်ပြုနိုင်လိမ့်မည်
WWDC 2019 ကိုလိုက်လျှောက်ပါ။ iOS 13၊ macOS 10.15 နှင့် watchOS6သတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube channel နှင့် iPhone News တွင်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုပါ။
WWDC 2019 မှာငါတို့မျှော်လင့်တာတွေ
WWDC3တွင် Apple နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများကိုအဓိကတင်ပြမည့်သတင်းကိုအကျဉ်းချုံးတင်ပြထားပါသည်။
ဒေတာများကို အသုံးပြု၍ အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အကန့်အသတ်ကို 150 MB မွ 200 MB အထိတိုးမြှင့်ပါ
အက်ပဲလ်သည်ယခင် MB 150 တွင်သတ်မှတ်ထားသောဒေတာအတွက်သတ်မှတ်ထားသော download limit ကို 200 MB အထိတိုးမြှင့်ထားသည်
developer များအတွက် iOS 12.4 ၏တတိယ beta ကိုယခုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
Apple သည် iOS 12.4 ၏တတိယ beta ကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် developer community အတွက်သာဖြစ်သည်။
iPhone အသစ်သည်မည်သည့်မော်ဒယ်လ်တွင်မဆို 3D Touch ကိုယူဆောင်လာမည်မဟုတ်ပါ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က iPhone XR တွင်ရှိခဲ့သော Haptic Touch အတွက် Apple သည် 3D Touch ကို iPhone မော်ဒယ်များမှထုတ်ယူလိမ့်မည်
Apple က Messages တွင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အတူ iOS အတွက် update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Messages သည် Apple မှအသစ်တင်သည့်အသစ်၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည် iOS 12.3.1 အတွက် bug fix ဖြစ်သည်
iOS 13 ၏နောက်ထပ်အယူအဆမှာ iPad သည်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်
ဒီဇိုင်နာကအိုင်ပက်ကိုအာရုံစိုက်နေတာကိုတွေ့နိုင်တဲ့ iOS 13 concept အသစ်။ WWDC မှာဇွန် ၃ ရက်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်
iOS 12.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ
Cupertino မှယောက်ျားများသည် iOS 12.2 ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ device ကို iOS 12.3 သို့သာပြန်ယူနိုင်သည်
Apple က iOS 12.4 Beta2ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
အက်ပဲလ်ဟာမိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေအတွက်ဒုတိယ iOS 12.4 Beta ကို credit card အသစ်နဲ့အတူအဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ
iOS 13 နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအားလုံးသည်ယနေ့အထိဖြစ်သည်
iOS 13 သည် WWDC 2019. ရောက်ရှိလာချိန်နှင့်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် operating system နှင့် ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားသည့်အချက်အလက်များအားလုံးကိုလေ့လာခဲ့သည်။
အက်ပဲလ်သည် iOS 12.4 ၏ပထမဆုံး Beta နှင့် developer များအတွက် WatchOS 5.3 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
လူအများစုက iOS 12.3 ကို iOS မိတ်ဆက်မတိုင်မီ Apple မှဖြန့်ချိမည့်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံး update ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့ကြသောအခါ ...
Apple က iOS 12.3 တီဗီအက်ပလီကေးရှင်းသစ်နှင့်စတင်ခဲ့သည်
iPhone နှင့် iPad အတွက် iOS 12.3 ကို update အားလုံးသည်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပြီး Apple Watch နှင့် tvOS 5.2.1 အတွက် watchOS 12.3 ကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။
iOS 13 သည် iPhone SE နှင့်သဟဇာတမဖြစ်နိုင်ပါ
ကောလာဟလအသစ်များအရ iOS 13 သည် iPhone SE ကိုနောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့မရောက်ရှိနိုင်သေးပါ။ ၎င်းသည် iPhone 6s နှင့်အတူတူညီသော hardware နှင့်အတူတူမျှဝေသော terminal ဖြစ်သည်။
iOS 13 တွင်တွေ့နိုင်သော concept ပုံစံအသစ်အတွေးအခေါ်များ
ဤ iOS 13 အယူအဆသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအတွေးအခေါ်များကိုပြသပြီးဖြစ်သည်။
developer များအတွက် iOS 12.3 Beta5ကိုရရှိပြီ
Apple က TVOS 12.3, macOS 12.3 နှင့် weatchOS 10.14.5 တို့၏သက်ဆိုင်ရာ beta များအပြင် iOS 5.2.1 ၏ TV beta အသစ်နှင့်အတူ iOS XNUMX ၏ပဉ္စမ beta ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
WatchOS6တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် App Store နှင့်နယ်ပယ်သစ်များပါ ၀ င်သည်
WatchOS6၏အင်္ဂါရပ်အသစ်များသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများရှိသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအသစ်များဖြစ်သည်
မိဘများထိန်းချုပ်မှုအက်ပလီကေးရှင်းများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလုံခြုံရေးပြbyနာများကြောင့်တရားမျှတသည်ဟုဖော်ပြထားသည့် Cupertino ယောက်ျားများကကြေငြာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Apple သည် iOS 12.3 ၏စတုတ္ထ beta၊ watchOS 5.2.1, macOS 10.14.5 နှင့် tvOS 12.3 တို့ကိုထုတ်လွှတ်ခဲ့သည်
Apple က၎င်း၏ iOS 12.3, tvOS 12.3, watchOS 5.2.1 နှင့် macOS 10.14.5 စတုတ္ထ beta ကိုထုတ်တော့မည်
ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ iOS 13 ဟာ Magic Mouse နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြသထားတယ်
ဒီ iOS 13 အယူအဆဟာ Magic Mouse ကို iOS နဲ့ iPad ပတ် ၀ န်းကျင်မှာပေါင်းစပ်ခြင်းရဲ့ရလဒ်ကိုပြသပြီး၎င်းသည်တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာပါ။
iOS 13 တွင် Siri သည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီး ပို၍ အရေးကြီးလာသည်
နောက်ဆုံးထုတ်အစီရင်ခံစာများအရ Siri သည် WWDC 13 တွင်တင်ဆက်မည့် iOS 2019 ဗားရှင်းသစ်တွင်ပိုမိုသောအရည်အချင်းပြည့်မှီမှုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
iOS 13 သည်ပြင်ပကိရိယာများမှဖိုင်များကို application များသို့တင်သွင်းခွင့်ပြုလိမ့်မည်
iOS 13 သည်ပြင်ပသိုလှောင်ရုံများမှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Third-party application များထဲသို့ဓါတ်ပုံတင်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ပဲတိုက်ရိုက်တင်သွင်းနိုင်လိမ့်မည်
iOS 13 သည် iPad တွင် mouse ကိုထည့်နိုင်သည်
လူသိများသောအယ်ဒီတာ Federico Viticci ၏အဆိုအရ iOS 13 သည် mouse သို့မဟုတ် TrackPad အတွက်အထောက်အပံ့ထည့်နိုင်သည်။
iOS 13 က Animojis အသစ်ကိုယူမယ်၊ နွား၊ ရေဘဝဲ၊ မောက်စ်၊
Animojis အသစ်စတင်ရန် Apple ကပြင်ဆင်နေသည်။ ထိုအထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးအနှုန်းများနှင့်ပြောင်းလဲနေသော Mickey Mouse နှင့် Emoji မျက်နှာကိုတွေ့နိုင်သည်။
developer များအတွက် iOS 12.3၊ tvOS 12.3 နှင့် watchOS 5.2.1 တို့၏တတိယ beta သည်ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သည်
Cupertino မှယောက်ျားလေးများသည် beta စက်ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် ...
MacOS 10.15 သို့လာသည့် Shortcuts, Screen Time နှင့်အခြား iOS အင်္ဂါရပ်များ
MacOS 10.15 သည်အခြားသူများအနေဖြင့် iOS အတွက်သိမ်းဆည်းထားသော Siri Shortcuts နှင့် Screen Time ကဲ့သို့သောလက်တဆုပ်စာအနည်းငယ်ကိုသာချေးယူလိမ့်မည်။
iOS 13 မှာအထူးသဖြင့် iPad အတွက် feature အသစ်တွေပါလိမ့်မယ်
ပထမပေါက်ကြားမှုသည် iOS 13 တွင်ထွက်ပေါ်လာမည့်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ iPad ၏တိုးတက်မှုအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်သည်
iOS 12.1.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ
Apple ဆာဗာများသည် iOS 12.1.4 ဗားရှင်းကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်ရာလက်ရှိ iOS 12.2 ဖြင့်လက်မှတ်ထိုးထားသောဗားရှင်းသို့သာအဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
developer များအတွက် iOS 12.3 ၏ပထမဆုံး beta ကိုယခုပင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
အနည်းဆုံး beta, iOS နှင့် tvOS beta များစတင်ရန် Apple ၏ဆာဗာများပြန်လည်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်သည်။
iOS 12.2 ကို Apple News +၊ animojis အသစ်နှင့်အခြားအရာများဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာ Apple မှ၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားဝင်တင်ဆက်ရန်စီစဉ်ထားသောတင်ဆက်မှု ...
developer များအတွက် IOS6Beta 12.2၊ macOS 10.14.4, watchOS 5.2 နှင့် tvOS 12.2
Apple က iOS 6, macOS 12.2, watchOS 10.14.4 နှင့် tvOS 5.2 တို့၏ beta 12.2 ဗားရှင်း developer များအားလုံးဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Apple က iOS5Beta 12.2, watchOS 5.2 နှင့် tvOS 12.2 တို့ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Apple က iOS 12.2, tvOS 12.2 နှင့် watchOS 5.2 ၏ပဉ္စမ beta ကိုထုတ်လွှင့်သည်။
Cupertino မှလူငယ်များသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားတွင်လေ့ကျင့်ခန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်ဆုတံဆိပ်အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အား ထပ်မံ၍ စိန်ခေါ်လိုက်ပြန်သည်။
ဒီဟာက iPad အတွက် iOS 13 အတွက်အကောင်းဆုံးအယူအဆဖြစ်သည်
Léo Vallet သည် iOS 13 အတွက်အယူအဆသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင်သူသည်အိုင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် iPad ကိုအသုံးချနိုင်မှုကိုအာရုံစိုက်သည်။
developer များယခု subscriptions ကိုအပေါ်ပိုပြီးကမ်းလှမ်းမှုပူဇော်နိုင်ပါလိမ့်မည်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း App Store ၏စာရင်းပေးမှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသောတိုးတက်မှုတစ်ခုမှာ ...
IOS3beta 12.2 သည်အုပ်စုလိုက် FaceTime ခေါ်ဆိုမှုကိုထပ်မံပြုလုပ်နိုင်သည်
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က Apple မှ iOS3၏ beta ဗားရှင်း 12.2 သည် FaceTime အုပ်စုခေါ်ဆိုမှုလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်သည်
Apple သည် iOS 12.2, watchOS 5.2 နှင့် tvOS 12.2 အသစ် betas ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Apple သည် iOS 12.2 ၏တတိယ Betas၊ watchOS 5.2 နှင့် tvOS 12.2 တို့ကိုတည်ငြိမ်မှုမြှင့်တင်မှုနှင့်ယခင်ဗားရှင်းများမှအမှားပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
patch ပြီးနောက်ပြproblemsနာများရှိနေသေးသည့်အုပ်စုများအတွက် Facetime
2019 ရဲ့အက်ပဲလ်အတွက်အစပြုခဲ့တာကတော့ Group FaceTime ရဲ့လုံခြုံရေးအားနည်းချက်ကြောင့် ...
ဒီ iOS 13 အယူအဆဟာ iOS အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးကိုပြသထားတယ်
iOS 13 ၏ဤအယူအဆတွင် WWDC 40 တွင်ကျန် operating operating system များနှင့်အတူ function အသစ် ၄၀ ကျော်ကိုတွေ့ရသည်။
iOS 12.1.4 သည် 0T Day အားနည်းချက်နှစ်ခုကိုဖြေရှင်းသည်။ FaceTime Group Call Security သာမဟုတ်ပါ
iOS 12.1.4 သည် FaceTime မှတဆင့် Group Calling ပြfixနာများကိုဖြေရှင်းပေးရုံသာမက 0-day အားနည်းချက်နှစ်ခုကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်သည်။
FaceTime Bug ကိုပြုပြင်ရန် Apple က iOS 12.1.4 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Apple က iOS 12.1.4 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး FaceTime လုံခြုံရေးအားနည်းချက်ကိုပြုပြင်ပေးသောသူတစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့ကိုသူလျှိုလုပ်ခွင့်ပေးသည်
Apple က iOS 12.1.1 ကိုဖြန့်ချိပြီးနောက် iOS 12.1.2 နှင့် iOS 12.1.3 ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်
iOS 12.1.1 နှင့် iOS 12.1.2 ဗားရှင်းများသည် Apple ၏ဆာဗာများတွင်၎င်းတို့၏လက်မှတ်ကိုဆက်လက်ရယူရန်အတွက်မရှိတော့ပါ၊ iOS 12.1.3 သည်ယနေ့ Apple လက်မှတ်ထိုးသည့်တစ်ခုတည်းသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။
iOS 13 တွင်ကင်မရာသုံးခုနှင့်အမှောင်စနစ်ပါဝင်သည့် iPhone ကို rendering အသစ်
ဒီနှစ်မှာ Apple ကမိတ်ဆက်ပေးမယ့်အိုင်ဖုန်းအသစ်ကိုအသစ်ထုတ်ပေးမယ့်အနာဂတ် iOS 13 ရဲ့အမှောင်စနစ်ဘယ်လိုပြသမလဲဆိုတာကိုပြသမှာပါ။
privacy အကြောင်းပြချက်များအတွက် iOS 12.2 သည် Safari ၏ gyroscope နှင့် accelerometer ကိုကန့်သတ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
လာမည့် iOS update နံပါတ် ၁၂.၂ သည် Safari မှတစ်ဆင့် gyroscope နှင့် accelerometer နှစ်ခုလုံးအား access ကို disable လုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဒုတိယ beta iOS 12.2, watchOS 5.2 နှင့် tvOS 12.2 ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Cupertino မှယောက်ျားလေးများသည် iOS 12.2 ၏ဒုတိယ beta ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးကုမ္ပဏီကလုပ်ဆောင်နေသည့်ကျန် operating system များဖြစ်သည်။
ioc 13 ကိုရရှိခြင်းမရှိဘဲ devices များများများစားစားကျန်ရှိနေတယ်
iOS 13 ကိုဇွန်လတွင် WWDC 2019 တွင်တင်ဆက်လိမ့်မည်။ အညီ ...
13 အတွက် Dark Mode နှင့်အတူ iOS 2019၊ Triple Camera နှင့် iPhone-C ကိုသုံးသည်
Bloomberg သည် Apple ၏ 2019 နှင့် 2020 အတွက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုပေးသည်။ သုံးဆကင်မရာနှင့် iOS 13 တွင်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကိုအတည်ပြုသည်
အလေးအနက် FaceTime ချို့ယွင်းမှုကြောင့်သင်ဖုန်းခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံခြင်းမရှိပဲကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်
iOS 12 သည်ကြီးမားသောလုံခြုံရေးချို့ယွင်းချက်များမရှိဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနေပုံရသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ခုခံနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း ...
iOS 12.2 ဖြင့် HomeKit မှတီဗွီကိုသင်ဤသို့ထိန်းချုပ်သည်
HomeKit နှင့် Siri မှတစ်ဆင့် TV များကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့် iOS 12.2 feature သစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊
Apple က iOS 12.2 Public Beta ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
Cupertino ကုမ္ပဏီသည်ပထမဆုံးသော Public Beta တွင် iOS 12.1 ကိုကြေငြာခဲ့ပြီးမည်သည့်သုံးစွဲသူမဆိုသုံးစွဲသူများကိုနှစ်သက်စေသည်။
Apple ကပထမဆုံး iOS 12.2 Beta နှင့် watchOS 5.2 ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
Apple သည် iOS 12.2 ဗားရှင်းအသစ်များနှင့် tvOS 5.2 နှင့် macOS 12.2 တို့နှင့်အတူ beta round ကိုစတင်ခဲ့သည်။
Apple က iOS 12.1.3, macOS Mojave 10.14.3, watchOS 5.1.3 နှင့် tvOS 12.1.2 တို့၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
iOS 12.1.3, macOS Mojave 10.14.3, watchOS 5.1.3 နှင့် tvOS 12.1.2 တို့နှင့်အတူ Apple သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ဖြန့်ချိမည့်နေ့လည်ခင်း။
iPad Pro 2018 သည် Post-Pc ခေတ်ကိုတကယ်အစပြုခဲ့သလား။
နောက်ဆုံးပေါ် iPad ကို Apple မှဖြန့်ချိလိုက်ခြင်းသည်သမားရိုးကျကွန်ပျူတာများအတွက်ပထမဆုံးစစ်မှန်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျပါဝါများများရှိသည်, အဘယျသို့ software ကိုကော?
iOS 12.1.3 ၏စတုတ္ထ beta ကို developer များနှင့်အများသုံး beta အတွက်အသုံးပြုသူများအတွက်ရနိုင်သည်
Apple က iOS 12.1.3 public beta ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုသူများနှင့်သုံးစွဲသူများအတွက်စတုတ္ထမြောက် beta ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
iOS 13 သည်လာရောက်လည်ပတ်မှုစာရင်းအင်းများတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်
iOS 13 ပါ ၀ င်သည့်ထုတ်ကုန်များ၏လည်ပတ်မှုသည် Apple ၏အဓိကမီဒီယာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်မကြာသေးမီလများကထက်များခဲ့သည်။
iOS 12 ကိုဖုန်း ၄ လုံးအနက် ၃ ခုတွင်တွေ့ရသည်
iOS4ဖြန့်ချိပြီး 12 လကုန်သွားသောအခါနောက်ဆုံးပေါ် iOS ဗားရှင်းကိုထောက်ပံ့ထားသောကိရိယာ ၄ ခုအနက် ၃ ခုတွင်ရရှိနိုင်သည်။
Apple သည် iOS 12.1.2 ၏ဒုတိယမူကွဲကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Cupertino မှယောက်ျားများသည် iOS 12.1.2 ၏တည်ဆောက်မှုအသစ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်အသေးစား bug များကိုပြုပြင်ပေးပြီး iOS 12.1.3 အသစ်ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သည်။
iOS 12.1.3 ၏ပထမဆုံး beta ကို developer များအတွက်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည် (Edited beta 2)
iOS 12.1.3 ၏ပထမဆုံး beta ကို developer များအတွက်ရရှိနိုင်ပြီ
Apple က iOS 12.1 ကိုလွှတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် iOS 12.1.2 ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်
Apple ၏ဆာဗာများသည် iOS 12.1 ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်ရာလွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီကထုတ်ပြန်ခဲ့သော iOS 12.1.1 နှင့် 12.1.2 ကိုသာကျွန်ုပ်တို့၏စက်များပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
iOS 12.1.2 ကို iPhone များအတွက်သီးသန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ပထမဆုံး beta iOS 12.1.2, watchOS 5.1.3 နှင့် tvOS 12.1.2 ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
iOS 12.1.2, warchOS 5.1.3 နှင့် tvOS 12.1.2 တို့၏ပထမဆုံး beta သည်တိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်ရန် developer community အတွက်ရရှိနိုင်သည်။
iOS 12 ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ devices ၇၀ မှာရပါတယ်
ဖြန့်ချိပြီးသုံးလအကြာတွင် iOS3ကိုထောက်ပံ့ထားသောကိရိယာအားလုံး၏ ၇၀% တွင်တွေ့ရှိရသည်။
HomeKit မြင်ကွင်းများကို HomePod အသုံးပြုနည်း
Apple က HomeKit ကို HomePod နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသော်လည်း shortcuts application ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ဤနည်းဖြင့် Apple သည်အုပ်စုအုပ်စု FaceTime ခေါ်ဆိုမှုများကိုကြေငြာသည်
FaceTime မှတဆင့်အုပ်စုလိုက်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ပထမဆုံးဗီဒီယိုသည် Apple ၏ YouTube channel တွင်တင်လိုက်သည်။
Apple က iOS 12.0.1 ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုရပ်လိုက်တော့ iOS 12.1 ကိုသာ install လုပ်နိုင်သည်
Cupertino မှယောက်ျားများသည် iOS 12.1, iOS 12.0.1 ၏ယခင်ဗားရှင်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုတော့ပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
developer များအတွက်တတိယ beta iOS 12.1.1 နှင့် tvOS 12.1.1 နှင့်ဒုတိယ watchOS 5.1.2 တို့၏ဒုတိယ beta
လာမည့် iOS 12 update အသစ်၏တတိယ beta သည် developer များသာမက watchOS နှင့် tvOS တို့၏လက်ထဲတွင်ရှိနေသည်။
Application name ရှေ့မှ iCloud သင်္ကေတသည် iOS တွင်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း
လျှောက်လွှာများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိသောအောက်သို့မြှားပါသည့် iCloud သင်္ကေတကိုသင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားမိပါကဤဆောင်းပါးတွင်သင့်အား၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုပြပါမည်။
KeenLab သည် iOS 12.1 ရှိ iPhone XS Max အသစ်ကို jailbreak ပြုလုပ်ခဲ့သည်
ဤရွေ့ကား iOS 12.1 ၏လက်မှယနေ့ဖြစ်ကောင်းလာမည်
iOS 12.1 အတွက် beta အရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်နောက်ဆုံး version ကိုယနေ့ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းတို့အားသတင်းအားလုံးကိုပြသသည်
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ရှိတယ်လီဖုန်းစာအုပ်ကိုဖတ်တိုင်းအဆက်အသွယ်များ၏အစဉ်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသင်ပြပါမည်။
မနေ့ကတနင်္လာနေ့ မှစတင်၍ Apple သည် iOS 12.0 ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းမပြုတော့ပါ
"Beautygate" ကို iOS 12.1 ဖြင့်ပြုပြင်မည်
Beautygate သည် iOS 12.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီး selfie ရိုက်ကူးစဉ် "beauty filter" ၏ bug ကိုပြင်ဆင်ပေးသည်
developer များအတွက် iOS 12.1 Beta5ကိုရရှိပြီ
အက်ပဲလ်က iOS5Beta 12.1 အသစ်နှင့် developer များအတွက် watchOS 5.1 နှင့် tvOS 12.1 တို့ကို eSIM နှင့် emoji အသစ်များဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Apple သည် iOS 12.1 beta, watchOS 5.1 နှင့် tvOS 12.1 တို့ကို developer များအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
တရားဝင် Apple အချက်အလက်များအရ iOS 12 သည်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများ၏ ၅၀% တွင်ရှိသည်
iOS 12 ၏ဒွါဒသမဗားရှင်းအားသဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများ၏ ၅၀% တွင်တရားဝင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
Apple သည် watchOS 12.1 နှင့် tvOS3နှင့်အတူ iOS 5.1 Beta 12.1 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Apple က iOS 12.1 Beta3ကိုထပ်မံဖြန့်ချိလိုက်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ထပ်အသစ်ထပ်မံဖြည့်စွက်မှု၏တင်ပြချက်ဖြစ်သည်။
Apple က iOS 11.4.1 ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အတွက်အသုံးပြုသူများကိုလျှော့ချခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်
Cupertino မှလူငယ်များသည် iOS 11.4.1 ဖြစ်သော Apple ကို iOS 11 မတိုင်မီကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့သောနောက်ဆုံးထွက် version ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းမပြုတော့ပါ။
Pixelmator သည် iOS 12 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
Pixelmator ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာသည်၎င်း၏ iOS အတွက်ဗားရှင်းတွင် iOS 12 နှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီရန်မွမ်းမံခဲ့သည်
သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက် Apple က iOS 12.0.1 ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Luca Todesco သည် iPhone XS Max အား jailbreak ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်
နာမည်ကြီးဟက်ကာ Luca Todesco သည် Apple ပစ္စည်းကို jailbreak ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင် iPhone XS Max အသစ်ဖြစ်သည်။
IOS 13 အယူအဆ - အိမ်မျက်နှာပြင်ဝစ်ဂျက်၊ အမှောင်စနစ်နှင့်သတိပေးချက်ဒီဇိုင်းပုံစံ
သဘောတရားများ၏ရာသီစတင်ခဲ့သည်။ ဤအခါသမယတွင် iOS 13 ၏အယူအဆကိုအမှောင်စနစ်နှင့်စုစုပေါင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်ထားသည်။
iOS 12 ဟာသူ့ရဲ့တိုးချဲ့မှုကိုအလွန်မြန်ဆန်စွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်
iOS 70 နှင့်အတူလာမည့် emoji အသစ် ၇၀ ကျော်
iOS 12.1, watchOS 5.1 နှင့် tvOS 12.1 တို့အတွက်ဒုတိယ beta ရှိပြီးဖြစ်သည်
ကလေးတွေဟာ Airtime ကန့်သတ်ချက်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါပြီ
ယခုသင်အခမဲ့ရယူနိုင်သော iTunes နှင့်အစားထိုး MacX MediaTrans
MacX MediaTrans သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများသို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော iTunes ကိုအစားထိုးပေးသည်။
iOS 12 Measurements app ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
Measurements အက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်၏ iPhone တွင် iOS 12 ဖြင့်ထည့်သွင်းထားပြီးသင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာဝတ္ထုများကိုတိုင်းတာရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်။
အများဆိုင် beta အစီအစဉ်ကို iOS တွင်မည်သို့ထားရမည်နည်း
iOS public beta ပရိုဂရမ်ကိုစွန့်ခွာရန်အချိန်တန်ပြီဟုသင်ထင်လျှင်ဤဆောင်းပါး၌၎င်းကိုမည်သို့လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ရမည်ကိုဖော်ပြပါမည်။
မင်းရဲ့ iPhone ဖုန်းမြည်သံတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖုန်းမြည်သံကိုဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပြီး၊ မိနစ်အနည်းငယ်၊ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်၎င်းတို့ကိုသူတို့ဆီအလွယ်တကူပို့ဆောင်နိူင်တယ်။
လျှို့ဝှက် iOS 12 မိုးလေဝသဝစ်ဂျက်ကိုမည်သို့ကြည့်ရမည်နည်း
iOS 12 တွင်ဝှက်ထားသောဝစ်ဂျက်ပါ ၀ င်ပြီးကောင်းမွန်သောနံနက်ခင်းတွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်နှင့်ပြောဆိုသည်၊ ၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်
IOS 12 အသုံးပြုမှုသည်ယခင် version များထက်ပိုမိုနှေးကွေးသည်
လူသိရှင်ကြားရရှိပြီးနောက် ၄၈ နာရီအကြာတွင်ဒွါဒသမ iOS ဗားရှင်းကိုထောက်ပံ့ထားသောပစ္စည်းများ၏ ၁၀% တွင်ရရှိနိုင်သည်
iOS 12.1 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအကြား Memoji ထပ်တူပြုခြင်းကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်
iCloud ကို အသုံးပြု၍ iOS 12.1 သည်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Memoji အသစ်အားကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများအကြားထပ်တူပြုခြင်းကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
iOS 12.1 Beta 1 တွင် Group FaceTime ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အလျားလိုက် Face ID ပါဝင်သည်
ပထမဆုံး iOS 12.1 Beta တွင် FaceTIme အတွက် group ခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော iPad Pro တို့ပါဝင်သည်။ ဥပမာ ID နံပါတ်အလျားလိုက်အထောက်အပံ့ရှိသည်။
Apple က iOS 12.1, watchOS 5.1 နှင့် tvOS 12.1 betas များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Apple က iOS 12.1 beta 1 နှင့် watchOS 5.1 beta 1 ကိုတီဗီအတွက်တီဗီနှင့် TVOS 12.1 တို့ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
iOS 12 သည်ယခုအခါသင့်စက်ပစ္စည်းများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ မွမ်းမံရန်ရနိုင်သည်
iOS 12 ကိုလပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးသည့်နောက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ သင့် iPhone နှင့် iPad ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့ယခု update လုပ်ပါ။
iOS 12 ကို update လုပ်ဖို့သင်သိထားသင့်တာမှန်သမျှ
Apple က iOS 12 ကိုစတင်တော့မည်ဖြစ်ပြီးသင်၏ကိရိယာအားလုံးကိုမွမ်းမံခြင်းမပြုမီသင်သိထားသင့်သမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။
4 iOS 12 အသစ်များအဟောင်းများကို iPhone တွင်မရရှိနိုင်
ထုံးစံအတိုင်း iOS 12 ရှိစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်အချို့သည်နောက်ဆုံးပေါ် iOS ဗားရှင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောမော်ဒယ်အားလုံးတွင်မရနိုင်ပါ။
ဤအရာများသည် iOS 12 နှင့်အတူရောက်ရှိလာမည့်သတင်းများဖြစ်သည်
လာမည့်စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်လာမည့်စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်လာမည့် iOS 12 နှင့်အတူလာမည့်သတင်းများအားလုံးနှင့် ပါတ်သက်၍ သင့်အားတိကျစွာစာရင်းပြုစုထားပါသည်။
လာမည့်စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်တနင်္လာနေ့တွင် MacOS Mojave 17 ကိုရရှိနိုင်သည်
ဒီနေ့ Keynote ကာလအတွင်း Cupertino မှယောက်ျားများသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက် operating system အသစ်၏တရားဝင်နေ့ရက်များကိုကြေငြာလိုက်သည်။
Apple က iOS 12 GM တစ်ပတ်တရားဝင်တရားဝင်မထွက်မှီတစ်ရက်အလိုတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Keynote Apple သည် iOS 12 GM ကိုဖြန့်ချိပြီးမကြာမီတွင်တရားဝင်သီအိုရီကိုနောက်အပတ်တွင်ထုတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
Apple သည် iOS 12 ကို Tips အက်ပလီကေးရှင်းမှစတင်ခဲ့သည်
Cupertino မှလူငယ်များသည် iOS 12 အသစ်ကိုသတင်းအားလုံး၏ Tips အက်ပ်မှတစ်ဆင့်အသိပေးခြင်းဖြင့်စတင်သည်။
မိုဘိုင်းကိရိယာများသည်အထူးသဖြင့်ရုံးသို့အလည်အပတ်ခရီးသွားခဲသောအသုံးပြုသူများအတွက်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ US တွင်ရှိခြင်းသည်ကုမ္ပဏီများအကြားတွင် iOS operating system ကိုအသုံးပြုမှုသည် ၇၉% အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆက်လက်တိုးတက်လျက်ရှိသည်။
Philips သည် Siri Shortcuts ကို၎င်း၏ Hue bulbs များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် iOS 12 သတင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်
iOS 12 နှင့် Siri shortcut အသစ်များမကြာမီရောက်ရှိလာပြီးနောက် Philips မှယောက်ျားများသည်သူတို့၏ Hue မီးသီးများသည်ဤအသစ်အဆန်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုသည်
Apple က iOS 12 Beta 12 ကို Update ပြုလုပ်နိုင်ပြီ
Apple က iOS 12 Beta ကို update လုပ်ခြင်းကိုပြတင်းပေါက်မှအမှားများကိုဖြေရှင်းပေးပြီးအမှန်တကယ်မရှိဘဲ update တစ်ခုရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
မင်းရဲ့ iPhone ကသင့်ကို iOS 12 Beta ကို update လုပ်ဖို့ဆက်ပြောနေသလား။ မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး
နောက်ဆုံး iOS 12 Beta မှအမှားအယွင်းကြောင့်နဂိုမရှိသောဗားရှင်းအသစ်သို့သင့်အားအကြောင်းကြားရန်နှောင့်ယှက်သောနဖူးစည်းစာတမ်းကိုအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရသည်။
iOS 12 တွင် CarPlay မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
CarPlay သည် iPhone နှင့် iPad အတွက် iOS 12 ဗားရှင်းတွင်အသံအမိန့်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုများကိုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းပြသည်။
ပြင်သစ်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနဥရောပမှပြောကြားသည်မှာစက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်သည် iPhone သစ်အတွက်တင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်
တစ်နှစ်ပတ်လုံးအက်ပဲလ်၌ကျင်းပသောအဖြစ်အပျက်များသည်ပြင်သစ်မှနောက်ဆုံးပေါ်သတိပေးချက်များအရ iPhone X ၏မျိုးဆက်သစ်သည်နောက်လာမည့်အလင်းရောင်ကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည် စက်တင်ဘာ ၁၂
Apple က iPhone နှင့် iPad အတွက် iOS 12 Beta 11 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Apple သည် iOS 11 ၏ beta 12 အသစ်ကိုတစ်ပတ်အတွင်းတတိယအကြိမ်အဖြစ်လွှတ်တင်လိုက်သည်။ MoOS Mojave နှင့် tvOS 12 အတွက် beta အသစ်များနှင့်အတူတကွလက်တွဲလိုက်သည်။
beta နှင့်အတူ Apple သည် beta 10 ကို developer များနှင့် public 8 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
Apple က developer များနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများအတွက် beta ဗားရှင်းများနှင့်အလှမ်းဝေးနေဆဲဖြစ်သည်။
1 စကားဝှက်သည် iOS 12 တွင်သော့ချက်ချက်သော autofill နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်
1Password သည် iOS 12 ကဲ့သို့ system နှင့်အဆင်မပြေစွာပေါင်းစည်းနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ username နှင့် password များကိုအလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါရစ်သမ်ကိုရပ်တန့်စေမထားပါနဲ့! developer များအတွက် iOS 12 Beta9ကို Apple ဖြန့်ချိခဲ့သည်
ယခင်ဗားရှင်း၏ပြfixနာများကိုဖြေရှင်းရန်အeight္ဌမ beta ဗားရှင်း၏အစွန်းရောက်မှုထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် Apple သည် iOS 12 Beta 12 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြdueနာများကြောင့် Apple သည် iOS 12 Beta7ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့သည်
Beta7အသစ်ကိုစတင်ပြီးနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်အက်ပလီကေးရှင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ပြperformanceနာများနှင့်အပလီကေးရှင်းများနှေးကွေးသောကြောင့်၎င်းကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သည်
iOS 12 တွင်အခြားသူများနှင့်ဓာတ်ပုံများမည်သို့မျှဝေမည်နည်း
iOS 12 ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးအရည်အသွေးမဆုံးရှုံးစေဘဲမည်သူ့ကိုမျှမဝေမျှနိုင်အောင်ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ
iOS 12 နှင့် iOS6beta 11.4.1 တို့၏မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု
Cupertino မှလူငယ်များသည်မနေ့က iOS 12 beta အသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ developer များအတွက်အထူးဆဌမဖြစ်သည်။ beta အသုံးပြုသူများအတွက်ပဉ္စမဖြစ်သည်။ iAppleBytes မှယောက်ျားများက iOS 11.4.1 နှင့် iOS 12 အကြားစွမ်းဆောင်ရည်ခြားနားချက်ကိုတွေ့နိုင်မည့်ဗီဒီယိုနှစ်ခုပြသခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး Beta6ဖြစ်သည်။
Apple သည် iOS 12 Developer Beta ကိုထုတ်လွှတ်ခဲ့သည်
အိုင်ဖုန်းနှင့်အိုင်ပက်ဒ်၏လည်ပတ်စနစ်က iOS 12 သည် developer များအတွက်ခြောက်ဆမြောက် beta ကိုပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
iOS, macOS, watchOS နှင့် tvOS beta များကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုသူအရေအတွက်သည်ကုမ္ပဏီ၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်နေသည်
သုံးစွဲသူများစွာနှင့် Apple သည် iOS ဗားရှင်းအသစ်တိုင်းကိုထုတ်ဝေသည့်အခါ developer profile ကိုရှာဖွေရန်အင်တာနက်သို့သွားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်က Tim Cook သည်အများပြည်သူသုံး beta သုံးစွဲသူ ၄ သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်
ဤပြသနာများသည်ပြေလည်သွားသောအမှားများနှင့် iOS 12 beta5သို့ရောက်လာသည့်အသစ်များဖြစ်သည်
iOS 12 ၏ပဉ္စမမြောက် beta သည်နှင့်အသစ်ရောက်ရှိလာမည့်ပြproblemsနာများအားကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလေ့လာပြီးပြသနာများကိုရှာဖွေပါ။
Apple က iPhone နှင့် iPad အတွက် iOS 12 Public Beta အသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Developer များအတွက်ပဉ္စမ beta ထွက်ပြီးနောက် Apple သည် iOS 12 Beta4ကိုအများပြည်သူသို့ထုတ်ပြန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံး iDevices တွင် iOS 12 ကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်။
iOS 12 Beta5သည် AirPods အားသွင်းသည့်နေရာအသစ်၏ပုံရိပ်အသစ်များကိုပြသသည်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစတိုးဆိုင်များသို့မလာမီလအနည်းငယ်အလိုတွင်အက်ပဲလ်က၎င်း၏ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုပြသခြင်း၏မူဝါဒသည်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်သည် iOS 12 ၏နောက်ဆုံးရရှိနိုင်သည့် beta code တွင်ပေါ်လာသည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကပုဂ္ဂလိက beta ကိုအသုံးပြုခဲ့သူများ၏ကျေးဇူးကြောင့်တရား ၀ င်တရားဝင်ကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ။
iOS 12 beta5သည်ယခင် version ၏ကြီးမားသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသည်
19:00 စပိန်အချိန်ပြီးနောက် iOS 12 ၏ပဉ္စမ beta သည်ယခင်ဗားရှင်း၏အမှားများကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ သင့်ချိန်းဆိုမှုကိုမကျေနပ်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
iOS 12 တွင်အလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်နည်း
iOS 12 ၏အလိုအလျောက်မွမ်းမံမှုများသည်နောက် iOS ၏နောက်ထပ်ဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ iPhone ကိုအမြဲတမ်း update လုပ်ဖို့သူတို့ကိုဘယ်လို activate လုပ်မလဲဆိုတာပြတယ်။
Sygic သည်၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းကို Apple CarPlay တွင်ပြသသည်
CarPlay အတွက် Sygic သည်လက်တွေ့ဖြစ်သည်။ ကျော်ကြားလှသော browser မှယောက်ျားများကသူတို့၏ CarPlay တွင်သူတို့၏ browser ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မည်ကိုဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်ပြသည်။
HomePod သည် iOS 12 ဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်
HomePod တွင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစွမ်းရည်ကဲ့သို့သော iOS 12 ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အတူယခုဆောင်း ဦး ရာသီ၌စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောသတင်းများပါ ၀ င်နိုင်သည်။
iOS4Betas 12, tvOS 12 နှင့် watchOS5တို့ရောက်လာသည်
Apple သည် iOS 12 ၏စတုတ္ထမြောက် Beta နှင့်သက်ဆိုင်သည့် watchOS5နှင့် tvOS 12 တို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယမန်နေ့ကဖြန့်ချိခဲ့သော MacOS Mojave အပြင်
iOS 11.4.1 ၏အသစ်ကန့်သတ်ထားသော USB Mode အလုပ်လုပ်ပုံ
iOS 11.4.1 ၏ကန့်သတ်ထားသော USB mode သည် iPhone နှင့် iPad တို့၏လုံခြုံရေးကိုတိုးတက်စေသည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
iOS 12 လုံခြုံရေးသော့ချက် AutoFill ၏လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ
Auto-Fill function သို့မဟုတ် iOS 12 ရှိလုံခြုံရေးသော့များကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်ခြင်းက developer များအကြားလုံခြုံရေးသံသယများဖြစ်စေသည်။
developer များအနေဖြင့် Shortcuts အက်ပလီကေးရှင်းကိုရရှိနိုင်သည်
ယနေ့တွင်အက်ပဲလ်သည်တီထွင်သူများ (တီထွင်သူအကောင့်ရှိသူများ) အား Testflight မှတစ်ဆင့် Shortcuts အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။